KENYA oo soo saartay amar cusub oo saameynaya Soomaalida u socdaasha dalkeeda (Muxuu yahay dandaansiga Kenya?) | HalQaran.com
KENYA oo soo saartay amar cusub oo saameynaya Soomaalida u socdaasha dalkeeda (Muxuu yahay dandaansiga Kenya?)
Nairobi (Halqaran.com) – Dowladda Kenya ayaa soo saartay amar cusub oo ku saabsan socdaalka dadka Soomaaliyed ay ku tagayaan gudaha dalka Kenya.
Muwaadiniinta Soomaaliyed ayaa Kenya waxa ay kala kulmayaan tacadiyo la xiriira dhanka safarka, maadaama warqad ka soo baxday laanta socdaalka Kenya lagu soo rogay Soomaalida Awaamiir cusub.
Warqad kasoo baxday Waaxda socdaalka dalka ayaa lagu caddeeyay in Viisaha dal ku galka laga qaadan doono Magaalada Nairobi Garoonka Jomma Kenyatta, islamarkaana baaritaano Amni oo xooggan lagu soo marsiin doono Muwaadiniinta Soomaaliyeed Wajeer.
Amarkaan ayaa si gaar ah u sameyn doona dadka haysta Baasaboorka Diblumaasiga ee Soomaaliya, inkastoo kuwa haysta Baasaboorka shacabka qudhooda baaritaanka uu saameynayo.
Ugu dambeyn, dowladda Soomaaliya iyo Kenya ayaa Bishan gudaheeda isku arki doona Maxkamadda Hague halkaasi oo ay taallo dacwadda badda Soomaaliya ee Kenya muranka ay galisay.
Soomaalida u socdaasha Kenya